Imiyalelo -Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
1.Ulumkiso ngokusetyenziswa kwemodyuli yeLCD
Isilumkiso ngombane osisigxina: Amanyathelo alandelayo kufuneka enziwe ngaphambi kokuvula okanye ukulungisa okanye Ukuthengisa nge-LCM:
Ukunxiba umtya wesandla esi-anti-static.
Ukunxiba iimpahla ezichasayo.
Umgangatho we-anti-static unokusetyenziswa, ngakumbi kubushushu obomileyo nobuphantsi [ukufuma okuphantsi] okusingqongileyo.
Sebenzisa isikhongozeli ngezinto ezichasayo.
1-2 Cima iswitshi yamandla ngaphambi kokufaka, ukudibanisa okanye ukuhambisa nge-LCM.
Ukuthintela ingxaki ye-EMl, nceda unxibelelanise ngokufanelekileyo i-LCM kwizixhobo kunye ne-EMC ukhuseleko.
1-4 Umahluko kufuneka uhlengahlengiswe kwimeko efanelekileyo nge-VR ukuba i-LCM iqhutywa kwinqanaba eliphezulu le- ubushushu.
I-1-5 lt kungcono ukuba nesifudumezi esakhelwe-ngaphakathi kwi-LCM ukuphucula isantya sokubonisa esisezantsi ubushushu.
Ukuthintela ukukrwela iLCD, nceda ungayisusi ifilimu yokhuselo ngaphambi kokufaka i-LCM.
1-7 Nceda ugcine indawo esebenza ngokucocekileyo ukukhusela i-LCM kumasuntswana amdaka.
1-8 Nceda ungavuli i-LCM ukuba ayiphumelelanga, inokuchaphazela ukwenziwa kohlalutyo.
1-9 Ebuthathaka kwi-ultraviolet thintela ukusetyenziswa okanye ukuvezwa phantsi kwelanga ngaphandle kokuba kusebenza kwi-ultraviolet.
1-10 Ukuba ufuna ukwandisa i-PIN okanye intambo eguqukayo eguqukayo xa usebenza, nceda unakekele i-welding isiphumo, esifana nesekethe emfutshane okanye ukuwelda okubi.
2.Ukulumkisa ngokusetyenziswa kwemodyuli ye-OLED
Ukuphepha ukusebenzisa umothuko ogqithisileyo kwimodyuli okanye ukwenza naluphi na utshintsho kwiinguqu kuyo.
2-1-2. Musa ukwenza imingxunya eyongezelelweyo kwibhodi yesekethe eprintiweyo, lungisa imilo yayo okanye utshintshe izixhobo zemodyuli yokubonisa ye-OLED.
2-1-3 Sukuyidibanisa imodyuli yokubonisa ye-OLED.
2-1-4 Sukuyisebenzisa ngaphezulu komgangatho opheleleyo.
2-1-5 Musa ukuwisa, ukugoba okanye ukujija imodyuli yokubonisa ye-OLED.
Ukuthengiswa kwe-2-1-6: kwiitheminali ze-IO kuphela.
Ukugcinwa okungu-2-1-7: nceda ugcinwe kwisitya sombane esingasebenziyo kunye nendawo ecocekileyo.
I-2-1-8 Kuyinto eqhelekileyo ukusebenzisa "iScreen Saver" ukwandisa ixesha lokuphila kwaye sukusebenzisa ukulungiswa ekubunjweni ixesha elide kwisicelo sokwenyani.
2-1-9 Sukusebenzisa ulwazi olusisigxina kwiphaneli ye-OLED ixesha elide, oya kuthi "ulayishe isikrini" ixesha lesiphumo.
I-Winchester eyi-2-1-10 inelungelo lokutshintsha izinto ezizizo, kubandakanya ne-R2 kunye ne-R3 yokulungisa (Resistors, capacitors kunye nezinye izinto ezenziwayo ziya kwahluka imbonakalo kunye nombala obangelwe sisupplier eyahlukileyo.)
I-2-1-11 i-Winstar inelungelo lokutshintsha i-PCB Rev. (Ukuze anelise uzinzo, Ukuphuculwa kolawulo kunye nokusebenza kweyona mveliso ilungileyo ... njl.njl ezichaphazela iimpawu zombane kunye nemilinganiselo yangaphandle, iWinstar inelungelo loku lungisa ingxelo.)
Ukuphathwa kwamanyathelo okhuseleko
2-2-1 Kuba iphaneli yokubonisa yenziwe ngeglasi, sukusebenzisa iimpembelelo zoomatshini ezinje kuthi ukuhla kwisikhundla esiphakamileyo.
2-2-2 lUkuba ipaneli yokubonisa! yaphulwe ngengozi ethile kwaye izinto ezingaphakathi zendalo ziyavuza, ulumke ungaphefumli okanye ukhothe into ephilayo.
2-2-3Ukunyanzelwa kusetyenziselwa ukubonakalisa umphezulu okanye ubumelwane bayo kwimodyuli yokubonisa ye-OLED, Isakhiwo seeselfowuni sinokonakaliswa kwaye ulumke ungasebenzisi uxinzelelo kula macandelo.
I-polarizer egubungele umphezulu wemodyuli yokubonisa ye-OLED ithambile kwaye ikrwele ngokulula.Nceda uqaphele xa uphatha imodyuli yokubonisa ye-OLED.
2-2-5 Xa umphezulu wepolarizer yemodyuli yokubonisa ye-OLED inomhlaba, coca umphezulu. It uthatha ithuba ngokusebenzisa iteyiphu yokubambelela.
Iteyiphu yokuLungisa iScotch engu-810 okanye efanayo
Ungaze uzame ukuphefumla umhlaba ongcolileyo okanye usule umphezulu usebenzisa ilaphu eliqukethe isinyibilikisi
Njenge-ethylalcohol, kuba umphezulu wepolarizer uza kuba namafu
ukuba i-liquid elandelayo kunye ne-solvent zingonakalisa i-polarizer:
2-2-6 Bamba imodyuli yokubonisa ye-OLED ngononophelo olukhulu xa ubeka imodyuli yokubonisa ye-OLED kwi Inkqubo yokuhlala. Sukufaka uxinzelelo olugqithisileyo okanye uxinzelelo kwimodyuli yokubonisa ye-OLED Ukugoba ifilimu ngobume bephethini ye-elektrode. Ezi zixinzelelo ziya kuba nefuthe kumboniso ukusebenza, kwakhona, khusela ukuqina okwaneleyo kumacala angaphandle.
2-2-7 Sukufaka uxinzelelo kwiichips ze-LSI kunye namacandelo abunjiweyo ajikelezileyo.
2-2-8Ungangqubani okanye uguqule imodyuli yokubonisa ye-OLED.
2-2-9 Sukufaka imiqondiso yokufaka ngelixa amandla engqondo ecinyiwe.
2-2-10 Nika ingqalelo eyoneleyo kwimeko yokusebenza xa unikezela ngeemodyuli ze-OLED Ukuthintela ukwenzeka kweengozi zokwahlukana kwezinto ngombane ongashukumiyo.
Qiniseka ukuba wenza umhlaba womhlaba xa uphethe iimodyuli zokubonisa ze-OLED.
Qiniseka ukuba izixhobo zomhlaba uzisebenzisa okanye uzidibanise njengeentsimbi ze-soldering.
Ukucinezela ukuveliswa kobungakanani obumileyo, kunqande ukuqhuba umsebenzi wendibano phantsi komile iimeko.
Ifilimu ekhuselayo isetyenziswa kumphezulu wepaneli yokubonisa yeOLED Qaphela ukuba umbane ongashukumiyo unokuveliswa xa ucoca ifilimu ekhuselayo.
Ifilimu yokuKhusela i-2-2-11 isetyenziselwa umphezulu wepaneli yokubonisa kwaye isusa ifayile ye- Ngeli xesha, ukuba imodyuli yokubonisa ye-OLED ibikhona egcinwe ixesha elide, intsalela yezinto zokuncamathela kwifilimu yokhuselo inokuhlala kumphezulu wepaneli yokubonisa emva kokususwa kwefilimu. Kwimeko enjalo, susa intsalela imathiriyeli ngendlela eqaliswe kweli candelo lingentla 5.
2-2-12 Ukuba amandla ombane asetyenziswa xa imodyuli yokubonisa ye-OLED isenziwa okanye xa injalo ibekwe phantsi kweendawo ezinomswakama ophezulu, ii-electrode zinokumoshakala kwaye zilumke kuphephe oku kungasentla.
Amanyathelo okhuseleko 3
3-1 Xa ugcina iimodyuli zokubonisa ze-OLED, zibeke kwiingxowa zokukhusela zombane ezingaphephekiyo ukubonakaliswa kukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo okanye kwizibane zezibane zefluorescent. Kwaye, ukunqanda ukuphakama ubushushu kunye nokusingqongileyo okuphezulu kokufuma okanye ubushushu obuphantsi (ngaphantsi kwe-0 ° C).
4. Inkcazo yePixel
Qaphela1: Ukuba iipikseli okanye isiphako senxalenye yepikseli engaphezulu kweepesenti ezingama-50 zeepikseli ezichaphazelekayo okanye indawo yepikseli, ithathelwe ingqalelo njengesiphene.
Qaphela2: Akufuneki kubekho ukungafani okungafaniyo okubonakalayo nge-5% ND Filter ngaphakathi kwe-2 sec amaxesha okuhlola.
Qaphela3: I-Mura kunye nechaphaza eliqaqambileyo elihlolwe nge-5% yokuhambisa i-ND Isihluzi ngolu hlobo lulandelayo.